Mareykanka oo Rushka ku eedeyay duqentii gargaarka - BBC News Somali
Mareykanka oo Rushka ku eedeyay duqentii gargaarka
Image caption Duqeynta Syria
Saraakiil u hadlay dowlada Mareykanka aya BBC-da u sheegay in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay mas'uul ka yihin duqeymihii loo gestay kolonyo baabuur ah oo siday gar-gaar kuwaas oo isninti aynu soo dhafnay lagu duqeeyay gudaha wadanka Suuriya.
Masuuliyintu waxaa ay sheegeen in labo kamid ah diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay hawada kujireen waxyar un kahor inta aan la duqeyn kolonyada gar-gaarka .
Waxay intaasi ku dareen in marka la eego qaabka loo fuliyay weerarkaasi, ay u muuqata in tahay mid aanay fulin ciidamada Suuriya .
Hasayeshe dowlada Ruska oo ka hadashay arinkani aya iska fogesay edeymaha loo soo jeediyay iyadoo sheegtay in diyaaradhooda dagaalka iyo kuwa Cidamada Dowlada Suuriyaba aysan ku lug laheyn duqeyntaasi.
Waxaa ayna duqeyntaasi ku eedeysay Dowladda Suuriya dagaalyahanada Mucaaradka ee la dagaalamaya Bashar - Al-asad.
Wazaarada gashaandhiga ee Ruushka ayaa sidoo kale sheegtay in diyaaradahooda drons-ka ee aan duuliyaha lahayn ay ku daba jireen kolonyada ,basle markii dambe la damiyay Kamerooyinkii ku rakibanaa diyaradahaasi in aanu dhicin weerarkasi.
Waxaa uu na weerarakaasi dhacay saacado un kadib markii Dowlada Suuriya ay ku dhawaqday in xabad-joojintii socotay muddo tobobaad ah ay dhamaatay.